कोरोना भाइरस : चीनको बाटोमा किन हिँड्न सक्दैनन् अरु राष्ट्र ? « Lokpath
२०७६, ५ चैत्र बुधबार १२:०४
कोरोना भाइरस : चीनको बाटोमा किन हिँड्न सक्दैनन् अरु राष्ट्र ?
प्रकाशित मिति : २०७६, ५ चैत्र बुधबार १२:०४
जनवरीमा जब चीनले कोरोना भाइरसलाई फैलिनबाट रोक्नलाई अभूतपूर्व कदम चाल्ने घोषणा गरेको थियो तब धेरै विश्लेषकहरुले यही कुरामा सङ्केत गरेका थिए कि यस्ता कदम चाल्न लोकतान्त्रिक मुलुकमा कति कठिन हुन्छ ।
ती उपायहरुमा हुबेइ प्रान्त र यहाँ बस्ने करिब ६ करोड जनसङ्ख्यालाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु(घरदेखि बाहिर निस्किन र कसैसँग भेट्नबाट प्रतिबन्ध लगाइनु) र भाइरसबाट संक्रमितहरुको उपचार गर्न १० दिनमै एउटा सिङ्गो अस्पताल बनाइनु पनि पर्छन् ।
यी उपाय अपनाइएको केही समयमा चीनमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आयो तर, बाँकी दुनियाँमा यो २ हप्तामै १३ गुणा बढी फैलियो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका(डब्लुएचओ) प्रमुख टेड्रस एडानमले कोरोनालाई एउटा पेन्डेमिक (यस्तो महामारी जुन संसारको धेरै भागमा फैलिसकेको छ) घोषणा गर्दै विश्वभरिका देशहरुले तत्काल र आक्रामक रुपमा कदम चाल्नुपर्ने बताए ।
यस्तो अवस्थामा यो प्रश्न खडा भएको छ कि कोरोना भाइरससँगको युद्धमा होमिएको चीनबाट लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले कस्तो पाठ सिके ?
के चीनको कालरात्री सकिएकै हो ?
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले मार्च १० मा कोरोना भाइरसको इपिसेन्टर वुहानको भ्रमण गरे । यस भ्रमणले यही सङ्केत ग¥यो कि चीन आफ्नो सबैभन्दा कहालीलाग्दो सङ्कटबाट माथि उठिसकेको छ ।
आधिकारिक तथ्याङ्कका अनुसार कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरुको सङ्ख्या दिनानुदिन घटिरहेको छ । अहिले त उक्त सङ्ख्या खुम्चिएर केही दर्जनमा सीमित भएको छ ।
न्यू योर्कमा काउन्सिल अफ फरेन रिलेसन्स अन्तर्गत ग्लोबल हेल्थका सिनियर फेलो यानजोंग ख्वान बताउँछन् कि चीनले उठाएको कदम बाँकी दुनियाँमा उठाउन मुश्किल छ ।
उनी भन्छन्, ‘चाहे लोकतान्त्रिक होस् या गैर लोकतान्त्रिक संसारमा कुनै पनि यस्ता देश छैनन् जो समाजमा यति प्रभावकारी र समग्र रुपमा दखल दिन सकोस् । भलै केही लोकतान्त्रिक मुलुकका नेता आफ्नो राष्ट्रमा पनि चीनकै तरिका अपनाउन चाहन्छन् तर, त्यसो गर्ने अधिकार र शक्ति दुवै उनीहरुसँग छैन ।’
चीनबाट सिक्नैपर्ने पाठ
विश्व स्वास्थ्य संगठनका सल्लाहकार डा.ब्रुस अलवार्डले भनेका छन् कि यस भाइरससँग लड्ने तरिका यो कुरामा निर्भर गर्दैन कि त्यो देश लोकतान्त्रिक हो या तानाशाही । डा.अलवार्डले हुबेइको निरीक्षणमा गएको ‘फ्याक्ट फाइन्डिङ’ समूहको नेतृत्व गरेका थिए ।
उनको भनाइ यो छ कि वास्तवमा दुनियाले अहिलेसम्म चीनको अनुभवबाट असली पाठ सिकेकै छैन ।
अलवार्ड यस विषयमा भन्छन्, ‘चीनबाट हामी यही सिक्न सक्छौं कि सबैथोक रफ्तारमै टिकेको हुन्छ । छोटो समयमै घटनाको पहिचान गरेर, व्यक्तिहरुलाई अलग राखेर, उनीहरुको निकट सम्पर्कमा रहेकाहरुलाई खोजेर, उनीहरुलाई पनि अलग राखेर हामीले यस किसिमका भाइरसहरुलाई काबुमा ल्याउन सक्छौं ।’
‘मानिसलाई बुझाइएको छ कि हामी कुन प्रकारको भाइरससँग लडिरहेका छौं । उनीहरुलाई यो पनि बुझाइएको छ कि यो कति गम्भीर छ र यो लायक बनाइएको छ कि सरकारसँग मिलेर चालिएका कदमहरुलाई प्रभावकारी बनाउन उनीहरुले सहयोग गर्न सकुन् ।’
घरमै बस्ने सल्लाह
प्रोफेसर डा.रोबर्टो बुरियानी भन्छन् कि कोरोना भाइरससँग लड्नलाई तानाशाही हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । इटालीले युरोप महाद्वीपकै सबैभन्दा शक्तिशाली तालाबन्दी लागू गरेको छ ।
इटालीले आफ्नो ६ करोडको आवादीलाई ‘लकडाउन’मा राखेको छ । देशमा खाना र फार्मेसी वाहेक सबै पसल बन्द छ । धेरैजनालाई एकै ठाउँ भेला हुनबाट रोकिएको छ र, घरभित्रै बस्ने सल्लाह दिइएको छ ।
यात्रामा रहेका हरेक व्यक्तिलाई यात्रा गर्नुको औचित्य स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको कागजपत्र साथमै लिएर हिँड्न आदेश दिइएको छ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरु पूरै बन्द छन् ।
डाक्टर रोबर्टोले ट्वीटरमा पोस्ट गरेका छन्, ‘यस भाइरसले अंकमाल गर्ने, किस गर्ने, साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने, कन्सर्ट वा थिएटरमा जाने सबै अधिकार खोसेको छ । यस युद्धमा जीतको दिन निकै सुन्दर हुनेछ । यो सबै समयको कुरा हो ।’
संक्रमणमा लगाम कसरी लगाउने ?
डा.ब्रुस अलवार्डले यो पनि भनेका छन् कि यस खतरासँग जुझ्नका निमित्त चीनका जनताहरुले देखाएको एकता र स्वेच्छिक प्रयास निकै प्रशंसनीय छ ।
उनी भन्छन्, ‘जनतालाई सरकारको डर छैन । उनीहरुलाई भाइरसको डर छ र, उनीहरुलाई लागिरहेको छ कि यससँग लड्न एकसाथ लाग्नैपर्छ । सरकारले मात्र मार्गनिर्देशन गर्ने काम गरेको छ । खासमा यो एउटा एकतावद्ध रुपमा गरिएको प्रयास हो ।’
दक्षिण कोरियामा ‘लक डाउन’ नगरी सफलतापूर्वक भाइरससँग लडिरहेका छन् । चीन, इटाली र इरान पछि दक्षिण कोरियामा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमणको मामिलाहरु भेटिएका छन् ।
हजारौं–लाखौं सर्वसाधारणलाई सडकमै परीक्षण गरिन्छ, ड्राइभरलाई सवारी साधनमै परीक्षण गरिन्छ ।
यसको निमित्त मोबाइल फोन र उपग्रह प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ । दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जे इनले यी प्रयासहरुलाई ‘कोरोना भाइरसविरुद्ध युद्ध’को संज्ञा दिइएको छ ।
अरु देश के गर्दैछन् ?
विश्वका अन्य राष्ट्रहरुको कुरा गर्ने हो भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यूरोपका २६ मुलुकहरुको यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यो प्रतिबन्ध शेनजेनको ‘बोर्डर फ्री’ इलाकाको देशहरुबाट आउने यात्रीहरुमा लगाइएको छ । यसको बावजुत अमेरिकामा ट्रम्पको कमजोर निर्णायात्मक क्षमताको आलोचना भइरहेको छ ।
वरिष्ठ डेमोक्रेट सांसदहरुको भनाइ यो छ कि कोरोना भाइरसको परीक्षणमा भएको कमी हटाउन ट्रम्पको असफलता चिन्ताजनक छ ।
हाउस स्पीकर नेन्सी पलोसी र सिनेट माइनरिटी लिडर चक शुमरले एक बयानमा भनेका छन्, ‘अमेरिकी जनतालाई सुरक्षित राख्ने र उनीहरुको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा सही तरिका यही हो कि राष्ट्रपतिले भाइरसविरुद्धको यस युद्धमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।’
अन्य युरोपेली राष्ट्रहरु पनि कोरोना भाइरस विरुद्ध इटालीजस्तै कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बाटोमा छन् । जस अन्तर्गत बेलायत सरकारले इटाली यात्रा गरेर फर्किएका जनतालाई १४ दिनसम्म अरुभन्दा छुट्टै राखिरहेको छ ।
मध्य पूर्व र एसियाली मुलुकको तयारी
इरानमा कोम नै कोरोना भाइरस संक्रमणको केन्द्रबिन्दु हो । सरकारले जनतालाई त्यहाँ नजान आग्रह गरेको छ । र, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मेडिकल चेक प्वाइन्ट्सहरु स्थापना गरेको छ ।
अन्य राष्ट्रले ‘लक डाउन’ लागू गरेका छन् । विद्यालयहरु पनि बन्द गरेका छन् ।
साउदी अरबले पनि कातिफ प्रान्तलाई लक डाउन गरेको छ । कातिफ साउदीको त्यही प्रान्त हो जहाँ कोरोना भाइरसको सबैभन्दा बढी संक्रमण भेटिएको छ ।
जापानले अप्रिलसम्मका लागि आफ्ना विद्यालयहरु बन्द गरेको छ । मध्य पूर्व र एसियामा यस्तै प्रकारका उपायहरु अपनाइएको छ ।
यूनेस्कोका अनुसार २९ देशमा विद्यालय बन्द गरिएकाले ३३ करोडभन्दा बढी बालबालिकाको शिक्षामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
त्यस्तै, ५ करोडभन्दा बढी विश्व विद्यालयका विद्यार्थीहरुको पढाइ प्रभावित भएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का प्रमुख डा.टेड्रसका अनुसार यस रोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र उनले सरकारलाई आफ्नो देश र राजनीतिक प्रणालीको आवश्यकता अनुरुप कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।
चीनको वुहान शहरबाट गत डिसेम्बर अन्तिम सातादेखि सुरु भएको कोरोना भाइरस ‘कोभिड १९’ को त्रास विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको छ ।
उद्गमस्थल चीनमा नियन्त्रणउन्मुख भइरहेको भाइरस ‘कोभिड १९’ अहिले विश्वमै महामारी बनेको छ । युरोप र अमेरिका निकै आक्रान्त हुँदै गएका छन् । ईटलीमा मृतक संख्या २५ सय नाघेको छ ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म विश्वभर ७ हजार ९ सय ८७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । एक लाख अन्ठानब्बे हजार ४ सय २२ केसहरु देखिएको छ । यो संक्रमितको संख्या हो । ८२ हजार ७ सय ६२ जनामा संक्रमण भएर उपचारपछि स्वास्थयलाभ गरी घर फर्किएका छन् । यो रोग एक सय ६५ देशमा फैलिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसलाई विश्वव्यापी समस्याको रुपमा घोषणा गरिसकेको छ । यो महामारी घोषणा भएपछि विश्व दुनियाँ झनै डराएको छ । तर डराउनु भन्दापनि यस रोगसँग लड्न सचेतना र साबधानी अपनाउनुपर्छ ।
मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढी चीनका नागरिक रहेका छन्। चीनपछि इटली, इरान र स्पेनमा धेरैको मृत्यु भएको छ। मार्च १७ अर्थात् मंगलबार फिलिपिन्समा ४५ जनामा नयाँ केस देखिएको छ।
जेरुसेलम । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले साउदी अरबका राजकुमार र अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग भेटवार्ता
बेइजिङ । चीन सरकारको सहयोगी नीतिका कारण चीनको हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास
हङ्कङ । कोरोना भाइरसका संक्रमितहरुको संख्यामा वृद्धि हुदै गएपछि पाकिस्तानमा फेरी शैक्षिक संस्थाहरु